ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့စကားအသုံးအနှုန်း (Language to Use for Negotiating by Guy Perring) - Myanmar Network
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့စကားအသုံးအနှုန်း (Language to Use for Negotiating by Guy Perring)
Posted by Myanmar Network on June 9, 2011 at 16:25 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတယ်ဆိုတာ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တွေ နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေသာ အသုံးပြုတဲ့ အဆင့်မြင့် ကျွမ်းကျင်မှုတစ်မျိုးလို့ မှားယွင်းပြီး ယူဆတတ်ကြတဲ့အတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတယ်ဆိုရင် ကြားရတဲ့သူတွေ ကြောက်တတ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ လူအများစုဟာ နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ရာမှာ ပုံမှန် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး နေကြတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှု ဒါမှမဟုတ် ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရောင်းချဖို့၊ လစာတိုးမြှင့်ပေးဖို့၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကို ဈေးလျှော့ပေးဖို့ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပစ္စည်းပိုပေးဖို့ တောင်းခံတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရာမှ အဓိကစဉ်းစားရမယ့် နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့ အစမ်းသဘောပြောကြည့်တဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေ အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မရင်းနှီး သေးဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ်ရင် ဒီတွေ့ဆုံပွဲဟာ တရားဝင် တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဲဒီလို သုံးနှုန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ “That is unacceptable”, ဒါလက်မခံနိုင်ဘူး၊ “That does not meet our requirements”, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ မပြည့်မီဘူး လို့ တိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု ပျက်ပြားသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပြောမယ့်အစား “would”, ဖြစ်လောက်တယ်၊ “wouldn’t”, မဖြစ်လောက်ဘူး သုံးပြီး လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ ပြောတာမျိုးက ပိုပြီးတော့ သင့်တော်မှုရှိပါတယ်။ “That would be unacceptable”, ဒါလက်မခံနိုင် လောက်ဘူး၊ “That wouldn’t meet our requirements”, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ မပြည့်မီ လောက်ဘူး လို့ ပြောမယ်ဆိုရင် ညှိနှိုင်းရာမှာ ပိုပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက လိုရင်းအချက်ကိုလည်း နားလည်သွားမှာပါဘဲ။
“Perhaps”, ဖြစ်နိုင်မလားမသိဘူး၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ “maybe”, ဖြစ်နိုင်မယ်၊ ဖြစ်နိုင်မလားမသိဘူး၊ “I’m afraid”, ပြောရမှာအားနာတယ် စသည်ဖြင့် အသုံးအနှုန်းတွေကို ဂရုပြုပြီးတော့ သုံးမယ်ဆိုရင် ပြောလိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တုံးတိကြီး မဖြစ်အောင် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာတွေ ပြထားပါတယ်။
Perhaps, we could reduce the costs involved by…….
......ပြီး ကုန်ကျစရိတ်တွေ လျှော့ချနိုင်မလားမသိဘူး။
Maybe, you could deliver the course overalonger period
သင်တန်းကို အချိန်နည်းနည်းတိုးပြီး ပို့ချပေးနိုင်မလားမသိဘူး။
I’m afraid our standard policy is to charge an overdue fee…….
ပြောရမှာအားနာတယ် ကျွန်တော်တို့ စံအနေနဲ့ ကျင့်သုံးတဲ့ မူဝါဒကတော့ ရက်လွန်ရင် ရက်လွန်ကြေး ကောက်ခံဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ရိုက် တုံးတိ ချဉ်းကပ်မှုကြောင့် တစ်ဖက်သား လန့်မသွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အခြားနည်းလမ်း တစ်ခုကတော့ “a bit”, နည်းနည်း ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-ဈေးကြီးတယ်လို့ ထင်မြင်ကြောင်း တိုက်ရိုက်ကြီး ပြောလို့ကလည်း မသင့်တော်ဘူးဆိုရင် အခုလိုမျိုးပြောနိုင်ပါတယ်။
I’m afraid that isabit more than we are prepared to pay.
ပြောရမှာအားနာတယ် ကျွန်တော်တို့ သုံးချင်တာထက် နည်းနည်းပိုနေလို့။
တိုက်ရိုက် ငြင်းဆိုပြောကြားတာကိုလည်း ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ “we can’t/won’t pay 15% commission”, ၁၅% ကော်မရှင် မပေးပါဘူး ၊ မပေးနိုင်ပါဘူး လို့ ပြောမည့်အစား
We are not inaposition to pay 15% commission.
၁၅%ကော်မရှင် ပေးဖို့ အဆင်မပြေဘူး (ပေးရလောက်အောင် မမြတ်ပါဘူး)။
We are unable to pay 15% commission
အခုအနေအထားအတိုင်း မဟုတ်တော့ဘဲ နောင်အခါမှာ အနေအထား အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောချင်ရင်တော့ “at this stage”, အခုအဆင့်မှာ ဒါမှမဟုတ် “at this point in time”, အခုအချိန်မှာ ဆိုတဲ့ စကားစုမျိုးတွေ သုံးနိုင်ပါတယ်။ တင်းမာပြီး အလျှော့အတင်းမရှိဘူးလို့ ရှုမြင်ခြင်း မခံရအောင် ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာ တင်းမာမှုကို လျှော့ကျဖို့ “passive tense” ကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကို အာရုံစူးစိုက်မှုမဟုတ်ဘဲ ပြဿနာကို အာရုံစူးစိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဝါကျနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
You promised to reduce the cost by 20%.
It was agreed that the cost would be reduced by 20%.
ဈေးကို ၂ဝ%လျှော့ပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယဝါကျကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြောလိုတဲ့အချက်ကတော့ အတူတူပဲ၊ သဘောတူညီချက်ရခဲ့ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စကားအသုံးအနှုန်းက ပိုပြီးတော့ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းရှိပြီး ခုခံကာကွယ် ပြောကြားမှု မဖြစ်ဖို့ အလားအလာများပါတယ်။
ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရာမှာ အစမ်းသဘောပြောကြည့်တဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး အတွက် မဟုတ်ဘူးလားလို့ မေးမြန်းတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီမေးခွန်းနှစ်ခုစလုံးမှာ မေးမြန်းတဲ့သူက “နောက်ကျလွန်းတယ်” ၊ “အန္တရာယ်များတယ်” လို့ ထင်မြင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “မဟုတ်ဘူးလား” လို့ မေးမြန်းတဲ့ မေးခွန်းကို သုံးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အများကြီးပိုပြီး ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းသဘောဆောင်တယ်။ စိတ်မဆိုးဖို့လည်း အလားအလာပိုပြီးတော့ ရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးသတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ မဟာဗျူဟာမှာ ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြား ခြားနားမှုတွေ အရေးပါနိုင်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းတဝါးဝါးပြောတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို ဘယ်လောက်ထိ ရွေးချယ်သုံးနှုန်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ယေဘုယျပြုပြီးတော့ ခြုံငုံပြောရင် မှားတတ်ကြောင်း သတိထားရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်တွေနဲ့ ဗြိတိသျှတွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု အနည်းပါးဆုံး ချဉ်းကပ်ပုံကို သုံးကြတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစမ်းသဘော အသုံးအနှုန်းတွေကို အသုံးများတာပါ။ အချို့ကတော့ အသုံးများလွန်းတယ်လို့ ယူဆကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်တွေကတော့ ပိုပြီး တိုက်ရိုက် ဒဲ့ဒိုး သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အစမ်းသဘော ပြောကြည့်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ပျော့ပျောင်းတဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံ လိုအပ်တယ်လို့ သိပ်ပြီး မထင်မြင်ကြဘူး။
(Guy Perring ၏ Language to Use for Negotiating အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/language-to-use-for မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးတယျဆိုတာ အမှုဆောငျအရာရှိခြုပျတှေ နိုငျငံအကွီးအကဲတှသော အသုံးပွုတဲ့ အဆငျ့မွငျ့ ကြှမျးကငျြမှုတဈမြိုးလို့ မှားယှငျးပွီး ယူဆတတျကွတဲ့အတှကျ ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးတယျဆိုရငျ ကွားရတဲ့သူတှေ ကွောကျတတျပါတယျ။ အမှနျတော့ လူအမြားစုဟာ နစေ့ဉျအလုပျလုပျရာမှာ ပုံမှနျ ညှိနှိုငျး ဆှေးနှေး နကွေတာဘဲ ဖွဈပါတယျ။ ဝနျဆောငျမှု ဒါမှမဟုတျ ပစ်စညျးတဈခုကို ရောငျးခဖြို့၊ လစာတိုးမွှငျ့ပေးဖို့၊ ဒါမှမဟုတျရငျ ပစ်စညျးပေးသှငျးသူကို ဈေးလြှော့ပေးဖို့ ဒါမှမဟုတျရငျ ပစ်စညျးပိုပေးဖို့ တောငျးခံတာမြိုးတှေ ဖွဈပါတယျ။
ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးရာမှ အဓိကစဉျးစားရမယျ့ နယျပယျတဈခုကတော့ အစမျးသဘောပွောကွညျ့တဲ့ စကားအသုံးအနှုနျးတှေ အသုံးပွုခွငျး ဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မရငျးနှီး သေးဘူးဆိုရငျ ဒါမှမဟုတျရငျ ဒီတှဆေုံ့ပှဲဟာ တရားဝငျ တှဆေုံ့ပှဲဖွဈတယျဆိုရငျ အဲဒီလို သုံးနှုနျးရမှာဖွဈပါတယျ။ “That is unacceptable”, ဒါလကျမခံနိုငျဘူး၊ “That does not meet our requirements”, ကြှနျတျောတို့ရဲ့ သတျမှတျခကျြနဲ့ မပွညျ့မီဘူး လို့ တိုကျရိုကျပွောမယျဆိုရငျ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျတဲ့ ခဉျြးကပျပုံဖွဈတဲ့အတှကျ ဆကျသှယျပွောဆိုမှု ပကျြပွားသှားနိုငျပါတယျ။ အဲဒီလို ပွောမယျ့အစား “would”, ဖွဈလောကျတယျ၊ “wouldn’t”, မဖွဈလောကျဘူး သုံးပွီး လြှော့လြှော့ပေါ့ပေါ့ ပွောတာမြိုးက ပိုပွီးတော့ သငျ့တျောမှုရှိပါတယျ။ “That would be unacceptable”, ဒါလကျမခံနိုငျ လောကျဘူး၊ “That wouldn’t meet our requirements”, ကြှနျတျောတို့ရဲ့ သတျမှတျခကျြနဲ့ မပွညျ့မီ လောကျဘူး လို့ ပွောမယျဆိုရငျ ညှိနှိုငျးရာမှာ ပိုပွီး အပွုသဘောဆောငျတဲ့ ပတျဝနျးကငျြကို ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ အဓိက လိုရငျးအခကျြကိုလညျး နားလညျသှားမှာပါဘဲ။
“Perhaps”, ဖွဈနိုငျမလားမသိဘူး၊ ဖွဈကောငျးဖွဈမယျ၊ “maybe”, ဖွဈနိုငျမယျ၊ ဖွဈနိုငျမလားမသိဘူး၊ “I’m afraid”, ပွောရမှာအားနာတယျ စသညျဖွငျ့ အသုံးအနှုနျးတှကေို ဂရုပွုပွီးတော့ သုံးမယျဆိုရငျ ပွောလိုတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို တုံးတိကွီး မဖွဈအောငျ အထောကျအကူပွုနိုငျပါတယျ။ ဥပမာတှေ ပွထားပါတယျ။
......ပွီး ကုနျကစြရိတျတှေ လြှော့ခနြိုငျမလားမသိဘူး။
သငျတနျးကို အခြိနျနညျးနညျးတိုးပွီး ပို့ခပြေးနိုငျမလားမသိဘူး။
ပွောရမှာအားနာတယျ ကြှနျတျောတို့ စံအနနေဲ့ ကငျြ့သုံးတဲ့ မူဝါဒကတော့ ရကျလှနျရငျ ရကျလှနျကွေး ကောကျခံဖို့ ဖွဈပါတယျ။
တိုကျရိုကျ တုံးတိ ခဉျြးကပျမှုကွောငျ့ တဈဖကျသား လနျ့မသှားအောငျ လုပျနိုငျတဲ့ အခွားနညျးလမျး တဈခုကတော့ “a bit”, နညျးနညျး ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးဖို့ဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ-ဈေးကွီးတယျလို့ ထငျမွငျကွောငျး တိုကျရိုကျကွီး ပွောလို့ကလညျး မသငျ့တျောဘူးဆိုရငျ အခုလိုမြိုးပွောနိုငျပါတယျ။
ပွောရမှာအားနာတယျ ကြှနျတျောတို့ သုံးခငျြတာထကျ နညျးနညျးပိုနလေို့။
တိုကျရိုကျ ငွငျးဆိုပွောကွားတာကိုလညျး ရှောငျကဉျြသငျ့ပါတယျ။ ဥပမာ “we can’t/won’t pay 15% commission”, ၁၅% ကျောမရှငျ မပေးပါဘူး ၊ မပေးနိုငျပါဘူး လို့ ပွောမညျ့အစား
၁၅%ကျောမရှငျ ပေးဖို့ အဆငျမပွဘေူး (ပေးရလောကျအောငျ မမွတျပါဘူး)။
အခုအနအေထားအတိုငျး မဟုတျတော့ဘဲ နောငျအခါမှာ အနအေထား အပွောငျးအလဲ ရှိနိုငျတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျးကို ပွောခငျြရငျတော့ “at this stage”, အခုအဆငျ့မှာ ဒါမှမဟုတျ “at this point in time”, အခုအခြိနျမှာ ဆိုတဲ့ စကားစုမြိုးတှေ သုံးနိုငျပါတယျ။ တငျးမာပွီး အလြှော့အတငျးမရှိဘူးလို့ ရှုမွငျခွငျး မခံရအောငျ ရှောငျရှားနိုငျပါတယျ။
ညှိနှိုငျးတဲ့နရောမှာ တငျးမာမှုကို လြှော့ကဖြို့ “passive tense” ကိုလညျး သုံးနိုငျပါတယျ။ လူတဈဦး တဈယောကျကို အာရုံစူးစိုကျမှုမဟုတျဘဲ ပွဿနာကို အာရုံစူးစိုကျတာမြိုးဖွဈပါတယျ။ အောကျဖျောပွပါ ဝါကနြှဈခုကို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ပါ။
ဈေးကို ၂ဝ%လြှော့ပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယျ။
ဒုတိယဝါကကြိုကွညျ့မယျဆိုရငျ ပွောလိုတဲ့အခကျြကတော့ အတူတူပဲ၊ သဘောတူညီခကျြရခဲ့ကွောငျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စကားအသုံးအနှုနျးက ပိုပွီးတော့ ညှိညှိနှိုငျးနှိုငျးရှိပွီး ခုခံကာကှယျ ပွောကွားမှု မဖွဈဖို့ အလားအလာမြားပါတယျ။
ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးရာမှာ အစမျးသဘောပွောကွညျ့တဲ့ အသုံးအနှုနျးမြိုး အတှကျ မဟုတျဘူးလားလို့ မေးမွနျးတဲ့ မေးခှနျးတှကေို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ဒီမေးခှနျးနှဈခုစလုံးမှာ မေးမွနျးတဲ့သူက “နောကျကလြှနျးတယျ” ၊ “အန်တရာယျမြားတယျ” လို့ ထငျမွငျနတော ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ “မဟုတျဘူးလား” လို့ မေးမွနျးတဲ့ မေးခှနျးကို သုံးလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ အမြားကွီးပိုပွီး ညှိညှိနှိုငျးနှိုငျးသဘောဆောငျတယျ။ စိတျမဆိုးဖို့လညျး အလားအလာပိုပွီးတော့ ရှိပါတယျ။
နောကျဆုံးသတိပွုရမယျ့အခကျြကတော့ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးတဲ့ မဟာဗြူဟာမှာ ယဉျကြေးမှု ကှဲပွား ခွားနားမှုတှေ အရေးပါနိုငျတယျဆိုတာပဲဖွဈပါတယျ။ စမျးတဝါးဝါးပွောတဲ့ စကားအသုံးအနှုနျးတှကေို ဘယျလောကျထိ ရှေးခယျြသုံးနှုနျးနိုငျတယျဆိုတာကိုလညျး သတိပွုသငျ့ပါတယျ။ ယဘေုယပြွုပွီးတော့ ခွုံငုံပွောရငျ မှားတတျကွောငျး သတိထားရပါမယျ။ ဒါပမေယျ့ ဂပြနျတှနေဲ့ ဗွိတိသြှတှဟော ယဘေုယအြားဖွငျ့ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျမှု အနညျးပါးဆုံး ခဉျြးကပျပုံကို သုံးကွတယျလို့ ယူဆကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အစမျးသဘော အသုံးအနှုနျးတှကေို အသုံးမြားတာပါ။ အခြို့ကတော့ အသုံးမြားလှနျးတယျလို့ ယူဆကွမှာဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျတှကေတော့ ပိုပွီး တိုကျရိုကျ ဒဲ့ဒိုး သုံးလရှေိ့ပါတယျ။ အစမျးသဘော ပွောကွညျ့တဲ့ အသုံးအနှုနျးတှနေဲ့ ပြော့ပြောငျးတဲ့ ခဉျြးကပျပုံ လိုအပျတယျလို့ သိပျပွီး မထငျမွငျကွဘူး။
(Guy Perring ၏ Language to Use for Negotiating အားဆီလြျောသလို ဘာသာပွနျဆိုထားပါသညျ။ အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ ရေးသားထားသော မူလဆောငျးပါးနှငျ့ အခွားစိတျဝငျစားဖှယျ ဆောငျးပါးမြားအား ဤနရောတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါသညျ။)
အထကျပါ ဆောငျးပါးအားကူးယူ၍ အခွား website နှငျ့ blog မြားတှငျ တငျမညျဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/language-to-use-for မှကူးယူကွောငျး ထညျ့သှငျးဖျောပွပေးပါရနျ။
Permalink Reply by Kyaw Zin Htoo Naing on June 9, 2011 at 16:50
အဲလို knowledge လေးတွေ ထပ် share ပေးပါအုံးနော်။ ပညာတော်တော် ရလိုက်ပါတယ်။
Permalink Reply by ko pauk on June 9, 2011 at 16:59
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on June 9, 2011 at 17:05
Permalink Reply by Aung Hlaing Tun on June 9, 2011 at 18:08
Permalink Reply by Ye Htut on June 9, 2011 at 18:18
Permalink Reply by Win Poh Poh on June 9, 2011 at 18:50
Thank you for your sharing. It is very precious for me.
Permalink Reply by Aung Soe Myint on June 9, 2011 at 19:43
Permalink Reply by Thoe seinne on June 10, 2011 at 9:14
Yes thank very much that's why I like Myanmar Network.
Permalink Reply by winwinhlaing on June 10, 2011 at 9:24
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်၊ နောင်လည်းအဲလိုပဲ ဗဟုသုတလေးတွေ ပို့ပေးပါဦး။MP3တွေလဲ များများပို့ပေးပါနော်။
Permalink Reply by Soe Linn Tun on June 10, 2011 at 9:33
Permalink Reply by moe pa pa on June 10, 2011 at 10:16
Permalink Reply by Win Thet Nwe on June 10, 2011 at 10:34
ခုလို Share လုပ်ပေးတာ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. နောက်လည်း မျှဝေပါအုံးနော်...